2021-2022 Barnaamijka Dib u bixinta Deeqaha Yaryar wuxuu furan yahay Oktoobar 2021 | East Portland Community Office
2021-2022 Barnaamijka Dib u bixinta Deeqaha Yaryar wuxuu furan yahay Oktoobar 2021
2021-2022 Barnaamijka Magista Deeqaha Yaryar
Codsigu wuxuu furmayaa
Jimcada Oktoobar 1, 2021
Xiliga Codsigu ku eg yahay
Isniinta Nufeembar 8, 2021 markay saacadu tahay 4:59pm
Barnaamijka Lacag Celinta Deeqaha Yaryar ee Xafiiska Bulshada Bariga Portland ayaa taageeraaya nashaadaadka dhisida bulshada ee ka socda Bariga Portland.. Wadarta guud oo dhan $47,000 oo maal gelin ah ayaa ku diyaarsan mareegtaan deeqda si loo siiyo ururada iyo kooxaha Barigga Portland. Cadadka la codsanaayo ayaa u dhexayn kara $2,900- $4,900. Maal gelinta ayaa u qalmi karta lacag celinta qarashaadka barnaamijka laga bilaabo Luuliyo 1, 2021 – Juun 30, 2022.
Si aad ugu qalanto, mashruucaagu waa inuu buuxshaa ugu yaraan hal kamid ah higsiyadeena barnaamijka:
● Kordhinta tirada dadka doorka ku leh kana qaybgalaaya bulshadooda;
● Xoojinta awooda bulshada ayadoo la adeegsanaayo, tusaale, hormarinta hogaaminta, xirfad dhisida, dhiiri gelinta wada shaqaynta iyo/ama iskaashiga, iyo dhisida bulshada;
● Kordhinta saamaynta bulshadu ku leedahay go'aannada dadwaynaha.
Civic Life ayaa deeqaha siin doonta keliya 501(c) 3 urur oo khayri ah oo diiwaangashan. Haddii aan ururkaagu sidaas u diiwaan gashanayn, fadlan raadso maal geliye dhaqaale oo ah,
501(c) 3 khayri ah,
hay'ad dawladeed, ama
ganacsi ka diiwaan gashan Magaalada Portland.
Barnaamijka Deeqahah Yaryar ayaa muhiimada siinaaya ka qaybgelinta bulshooyinka awal la liidi jiray iyo kuwa uusan si fiican ugu adeeggin barnaamijku sida waayeelka, dhalinta, dadka naafada ah, dadka Madoowga ah, Asaliyiinta ah ama Dadka kale ee aan Cadaanka ahayn, bulshooyinka Soo galootiga iyo Qaxootiga, dadka iyo qoysaska danyarta ah, iyo shaqsiyaadka LGTBQIA+ katirsan. Cid kasta ayaa codsan karta.
Khamiista, Oktoobar. 14 laga bilaabo 6:00 ilaa 8:00 iyo Isniinta, Oktoobar. 25 laga bilaabo 2:00 ilaa 4:00 p.m. - oo lagu qaban doono aalada Zoom
La xariir Carlee Smith, Iskuduwaha Deeqda ood ka helayso carlee.smith@portlandoregon.gov ama 503-823-5905
Xogta iyo Tilmaamaha
Shaqada Xafiiska Bulshada Barigga Portland (EPCO) waa in la taageero dhisida bulshada iyo nashaadaadka bulshada ee bulshooyinka kaladuwan ee ku dhaqan Barigga Portland. Barnaamijka Deeqaha Yaryar wuxuu doonaaya barnaamijyo:
Kordhiya tirada iyo isku dhafnaanta dadka qaybta ka ah kana shaqaynaaya bulshooyinkooda.
Xoojinaaya awooda bulshada iyo dhisida bulshada.
Kordhinaaya saamaynta bulshada ee go'aannada dadwaynaha.
Sanadkaan 2021, $47,500 ayaa diyaar u ah in lagu maal gasho barnaamijyada doorka siiya una faa'iidaynaaya dadka Bariga Portland. Cadadka la codsanaayo ayaa u dhexayn kara $2,900 ilaa $4,900.
Barnaamijkaan Deeqaha Yaryar ayaa keliya maal gelinaaya barnaamijyada ay doorka ku leeyihiin una faa'iidaynaaya dadka Barigga Portland. Shaqooyinka barnaamijku waa inay ka socdaa gudaha aaga uu u adeegaayo Xafiiska Bulshada Barigga Portland. (arag Sawirka 1).
*Ogoow – Haddii ay jirto sabab wanaagsan oo shaqada looga fulin karo meel ka baxsan Bariga Portland, tusaale, safar lagu tagaayo Hoolka Magaalada, waa la tixgelin doonaa.
Barnaamijkaan Deeqda ah ayaa si wayn muhiimada u siinaaya ka qaybgelinta bulshooyinka awal aysan si wanaagsan ugu adeegi jirin barnaamijyada iyo adeegyada Magaaladu sida waayeelka, dhalinta, dadka naafada ah, dadka Madoowga ah, Asaliyiinta ah ama Dadka kale ee aan Cadaanka ahayn, bulshooyinka Soo galootiga iyo Qaxootiga, dadka iyo qoysaska danyarta ah, iyo shaqsiyaadka LGTBQIA+ katirsan.
Muddada Codsiga Oktoobar​ 1, 2021
Foomka Codsiga waxaa laga heli karaa: https://www.eastportland.org/
Waxaa si wayn laguugu boorinayaa inaad ka qaybgasho mid kamid ah kulannada xog waraysiga deeqda. Kulanka ayaa ka jawaabi doona su'aalaha ku saabsan codsiga, hanaanka dib u eegista, iyo sida lacagaha loo adeegsan karo. Fadlan nasoo wac todobo maalmood kahor si aad u hesho adeegyada baahiyaha gaarka ah, daryeelka carruurta, iyo/ama codsiyada turjumaada luuqada ood ka wacayso 503-823-5905 ama TTY 503-823-6868. Dhammaan goobaha ayaa ah kuwo ay geli karaan dadka wata gaariga curyaanka.
Kulanka xogta 1 Oktoobar 14 markay tahay 6:00pm-8:00pm
Kulanka xogta 2 Oktoobar 25 markay tahay 2:00pm-4:00pm
Xiliga dhammaadka codsiga Nufeembar 8 markay tahay 4:59pm
Codsiyada waxaa lagu soo gudbin karaa si elektaroonig ah halkan:
ama boostada loogu diro:
Deeq qaatayaasha ayaa lagu dhawaaqayaa Nufeembar 22
Go'aannada gudigga dib u eegista ayaa iimeel loogu diri doonaa dhammaan codsadayaasha.
Taageerada dheeraadka ah ee qoraayaasha deeqda
Shaqaalaha EPCO ayaa ku siin kara caawimaada qorista codsiga oo fool-ka-fool ah markaad codsato. Haddii waqtigu saamaxo, waxaan diyaar u nahay inaan ku caawino, laga bilaabo caawimaad ku aadan naqshadaynta mashruucaaga ilaa talo ku biirinta codsigaaga deeqda ee qabyada ah. Haddii ay jiraan waxyaabo ku jira mashruucaaga oo kugu cusub, tusaale, helitaanka ogolaanshaha qasabka ah, la xariirida maal geliyaasha ama iskaashatada, ama helitaanka goobta shaqooyinkaaga, waxaa si gaar ah laguugu boorinayaa inaad nalasoo xariirto si aan kuu siino talo iyo caawimaad.
Codsiga aad soo dirto ayaa noqonaaya qayb kamid ah diiwaanka Dadwaynaha. Tani waxay ka dhigan tahay in qof kasta oo kamid dadwaynuhu uu codsan karo inuu arko. Xogtaada shaqsiga ah ee xariirka, sida magacyada, ciwaannada, lambarada taleefanka ama iimeelka, waxay ula dhaqmaysaa Civic Life mid sir ah lamana tusin doono dadwaynaha, illaa in maxkamadi amarto maahee.
Mashruucyada u qalma lacag celinta waa in la bilaabaa marka la gaaro ama kadib Luuliyo 1aad, 2021 ayna dhammaadaan Juun 30keeda, 2022. Waxaan aqbali doonaa codsiyada mashruucyada horay u biloowday, haddii shaqadu bilaabato kadib Luuliyo 1, 2021. Barnaamijyada dhacay kahor taariikhdaan uma qalmi doonaan deeqda.
Qarashaadka La ogol yahay
Shaqooyinka, daddaallada, iyo agabka loogu baahan yahay samaynta shaqada barnaamijka deeqda ayaa caadiyan ah agabka qarashkooda la oggol yahay. Kuwaan ayaa noqon kara agabka loogu baahan yahay barnaamijyada, cuntada munaasabada la qorsheeyay, qarashaadka hawl fududayn ama madadaalada, qarashaadka maamulka ee la xariira shaqooyinka guud ee ururada, iwm.
Qarashaadka Aan la ogolayn
Lacagaha la codsaday looma adeegsan karo qarashaad kasta oo codsaduhu ku geli karo diyaarinta codsiga, shaqooyinkiisa caadiga ah, deeqaha, daymaha, dib u bixinta daynta, lacag aruurinta, maal gelinta degdega ah, iyo/ama mashruucyada casriga ah. Qarashaadka ka dhashay keliya si kor loogu qaado ama loo hormariyo ganacsiga deeq qaataha ama ururku uma qalmaan in loo mago.
Qarashaadka Aan la ogolayn waxaa sidoo kale ku jira (laakiin kuma koobna): qaar kamid ah shaqooyinka siyaasada (tusaale, nashaadaadka kor loogu qaadaayo musharax gaar ah); iibsiga xashiiska ama cabitaannada khamrada; iibsiga guri. Fadlan waydii maareeyaha deeqda haddii aad qabto su'aalo ku saabsan sheey gaar ah oo ku jira miisaaniyada aad soo jeedisay. Haddii uu jiro, qor liiska lacago kasta oo dheeraad ah oo aad codsatay ama u adeegsatay mashruucaan oo ka yimid ilo kale. Adeegyada iyo agabka lagu deeqay waxaa ku jiri kara cadad qiyaasta lacagta dhammaan deeqaha iyo/ama saacadaha guud ee tabarucaada
Shuruudaha ugu yar ee helitaanka deeqaha Civic Life
a) 501(c) 3 khayri ah,
b) hay'ad dawladeed, ama
c) ganacsi ka diiwaan gashan Magaalada Portland.
Ma haysatid miyaa maal geliye dhaqaale? Ma hubtid miyaa waxa laga wado maal geliye dhaqaale? Ma hubtid miyaa 100% in maal geliyahaaga dhaqaale uu buuxinaayo shuruudaheena? XariirkaCarlee Smith, carlee.smith@portlandoregon.gov, 503-823-5905 sida ugu dhakhsaha badan si aad xog uga hesho dookhyada maal gelinta dhaqaale.
Caymisku wax saamayn ah kuma lahan u qalmidaada ama fursadaha lagugu xulan karo. Haddii laguu xusho deeqdaan, waxaa lagaa dooni karaa inaad keento cadaynta caymiska, ayadoo ku xiran shaqooyinka la maal gelinaayo. Haddii lagu xusho, shaqaalaha ayaa kaala shaqayn doona xaqiijinta inaad taqaano shuruudaha caymiska ee qabanaaya codsigaaga deeqda. Waa kuwaan xadiyada caymiska ee urur laga dooni karo si uu wax u iibsado.
Haddii lagu xusho lagaana doonaayo caymis, ururada ayaa la imaan doona joogtayna doona, dhammaan muddada deeqdu socoto caymiska qasabka ah ee hoos lagu sheegay. Waxaan kugu boorinaynaa inaad baarto qarashaadka la xariira caymiska soo socda.
Awooda Guud ee Ganacsiga Deeq qaatuhu waa inuu qaataa masuuliyada guud ee ganacsiga iyo caymiska waxyeelada hantida ee cadadka aan ka yarayn $2 milyan halkii dhacdaba.
Masuuliyada Gaadiidka Deeq qaatuhu waa inuu haystaa caymiska gaariyaasha si loo daboolo dhaawaca jirka iyo waxyeelada hantida ee cadadka aan ka yarayn $2 milyan halkii shil ba.
Magdhawga Shaqaalaha. Deeq qaatuhu waa inuu haystaa caymiska magdhawga shaqaalaha oo dhan cadad aan ka yarayn $1 milyan halkii shil ba, $1 milyan oo cudur ku dhaca shaqaale kasta, iyo $1 milyan oo xadiga xeerka cudurka ah.
Xad gudubka Jireed iyo Masuuliyada Fara xumada Galmada (waxaa laga doonayaa ururada u adeegga macaamiisha nugul, sida carruurta, waayeelka, iyo dadka qaba dhibaatooyinka garaadka iyo kobaca). Caymiska ayaa lagu qori karaa qaab dhacdo ah cadad aan ka yarayn $1 milyan halkii dhacdo. Xadi kasta oo cadadka sanadkii oo dhan ah waa inuusan ka yarayn $3 milyan.
Noocyada mashruucyada horay loo maal gashay
Kordhinta tirada dadka doorka ku leh kana shaqeeya bulshooyinkooda iyo kordhinta saamaynta ay ku leeyihiin go'aannada dadwaynaha - xirfad dhisida, munaasabadaha wada shaqaynta bulshada ee gaarka u ah luuqada iyo dhaqanka, dadaallada abaabulka bulshada.
Xoojinta awooda bulshada, tusaale, ayadoo la adeegsanaayo hogaaminta, xirfad dhisida, xoojinta wada shaqaynta iyo/ama iskaashiga, iyo dhisida bulshada; mashruucyada xoojinta dhalinta, wada hadallada bulshada, qorshaynta shaqooyinka bulshada.
Nashaadaadka dhisida bulshada - Mashruucyada sheeko abuurista bulshada, xafladaha miro jarista, xafladaha bulshada, iskaashiyada bulshada, dadaallada gurmadka ee rasmiga ah, beeraha bulshada, muraalka, dayac tirada isdhaafsiga ah.